What is Visual IVR Call Center? - Star Phone official website
Call Center များသည်နေ့တိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများစွာရရှိသည်။
Call Centre ကိုရိုးရှင်းသောဖောက်သည်များ၏မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများ၊ ပုံမှန်အရောင်းအ ၀ ယ်များပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုသူများကိုမှန်ကန်သော Call Center အေးဂျင့်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Rebecca Stewart 1.07.2019
Robert Gonzalez 5.03.2019
One Smart Star - သင်၏စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်အချက်များကိုအတူတကွပေါင်းစည်းနိုင်သည် 5.08.2019
ဖောက်သည်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အပြန်အလှန်အသံတုံ့ပြန်မှုအပေါ် Visual IVR ၏အားသာချက်များ 10.06.2019
© 2020 OneSmartStar. All rights reserved.